Tatitra Media |
Ahoana ny fomba hahitana ny mason-tsofina respiratoire N95, NIOSH, na KN95 sandoka avy any Shina.
MBA HITADY: Ity lahatsoratra ity dia havaozina tsy an-kijanona rehefa mahazo vaovao vaovao sy marina momba an'io olana mitohy io aho. Manomboka vahaolana koa aho amin'izay hamoronana ny tsena an-tserasera voalohany ho an'ny mpamatsy mahay sy mpampiasa farany ny PPE marina: PPEConnector.com. Nanomboka ny volana martsa, ...
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fifohana sigara dia ny mijanona ao anatiny. Raha ilaina ny mivoaka any ivelany amin'ny toe-javatra setroka, ity misy fampahalalana vitsivitsy momba ny fampiasana saron-tava respirator N95. Q. Inona no atao hoe respirator N95? A. Respirator N95 dia respirator manadio rivotra (APR) voamarin'ny National Inst ...
Ny tranonkala vaovao dia manazava ny fomba ahafahan'ny hopitaly mandoto sy mampiasa ny saron-tava N95 zara raha hiadiana amin'ny COVID-19
Rehefa manandrana miady amin'ny areti-mandringana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpamaly voalohany any Etazonia, dia voatery mihevitra ny fijanonana - manadio sy mampiasa indray ny saron-tava N95 hiarovana ireo izay manana asa mampiharihary virus amin'ny COVID-19 ireo mpiasan'ny fahasalamana. Androany, ekipa ...
Azo ampiasaina indray ve ny saron-tava N95?
Ny valanaretina Coronavirus (Covid-19) farany teo dia namorona fiovana be dia be tamin'ny fomba fiainana andavanandro sy ny mpitsabo manao ny asany. Ny tsy fahampian'ny respirator N95 dia nitranga talohan'izay (SARS, MERS, sns.), Fa tsy amin'ity ambaratonga ity. Ny CDC dia tsy manome soso-kevitra ny hitafanan'ny besinimaro ...
Ny tantara niaviany tsy hita isa an'ny sarontava N95
Sarotra ny mieritreritra ny mariky ny COVID-19 feno kokoa noho ny respirator N95. Mipetaka mafy amin'ny mason-tarehy ny sarontava ary afaka manivana 95% ny vongan-drivotra, toy ny viriosy, avy amin'ny rivotra, izay tsy azon'ny fitaovana fiarovana hafa (toy ny sarontava fandidiana). Devi mamonjy aina ...
Fampiasana saron-tava N95
Rehefa miditra amin'ny volana faharoa (aprily 2020) any Etazonia ny areti-mandoza COVID-19, dia iray amin'ireo fitaovana fitsaboana tsotra indrindra dia tsy ampy ny famenony: facemasks fiarovana ambaratonga ara-pitsaboana, matetika novolavolaina ary voatondro ho an'ny fampiasana tokana ihany. Ankehitriny, hihaonana amin'ireo mpitsikera sy haingana ...
'Nataon'i Nanjara firenena' Ireo mpanamboatra sarontava N95
Nataon'i Shina «namboarina ho tanindrazana» ireo mpanamboatra maska ​​N95 lehibe, ka vao mainka sarotra ho an'ny mpividy ny mandray tànana amin'ny vokatra iray izay, manjaka indray i Shina, hoy ny mpanafatra amerikana lehibe iray. "Ny kaomandinay rehetra, ho an'ny saron-tava N95 an-tapitrisany, dia nofoanana tamin'ny herinandro lasa teo," hoy i Leo Friedman, tale jeneralin'ny iPromo ao Chica ...
Misy mahasamihafa ny sarontava N95 sy KN95?
Saron-tava N95 / KN95 mahazatra 1. Inona ilay sarontava N95? Inona no tsy itovizany amin'ny sarontava KN95? Inona no saron-tava hafa mitovy kilasy? ● N95 saron-tava dia manondro sarontava voamarin'ny masoivohon'ny NIOSH (Ivotoeram-pirenena momba ny fiarovana sy ny fahasalamana amin'ny asa) miaraka amin'ny fahombiazan'ny fiarovana zara raha misy menaka tsy latsaka ...